China Yakakura Heat Exchanger Manufacture uye Fekitori |Yuanfang
Product parameters: zvinoenderana nevatengi kudhirowa kana yakakodzera Unyanzvi data dhizaini nekugadzira;
Kuvimbiswa kwehutano: kusangana nezvinodiwa zvekugadzira;
Makwikwi mabhenefiti: kuita kwepamusoro, kugadzikana kwekutsinhana kwekupisa uye hupenyu hurefu hwebasa;
Minda yekushandiswa: inoshandiswa mukupisa kupisa uye kupisa kupisa maindasitiri epetroleum, indasitiri yemakemikari, magetsi emagetsi, machira, kudhinda nekudhaya, mugodhi wemarasha, kutambisa kupisa kudzoreredza uye mamwe mapurojekiti;
Large Heat Exchanger, inonyanya kushandiswa petroleum, indasitiri yemakemikari, magetsi emagetsi, machira, kudhinda uye dhayi, mugodhi wemarasha, tsvina kupisa kupora uye mamwe mapurojekiti ekupisa kupisa uye kutamisa kupisa.Iyo kambani ine dhizaini, tsvakiridzo uye kusimudzira uye kugadzirwa kwemabhizinesi akabatanidzwa.
Product parameters:maererano nevatengi kudhirowa kana yakakodzera Unyanzvi data dhizaini nekugadzira;
Kuvimbiswa kwehutano:kusangana nezvinodiwa zvekugadzira;
Makwikwi zvakanakira:kushanda kwepamusoro, kuchinjana kwekupisa kwakagadzikana uye hupenyu hurefu hwebasa;
Nzvimbo dzekushandisa:inoshandiswa mukupisa kupisa uye kupisa kupisa maindasitiri e petroleum, indasitiri yemakemikari, simba remagetsi, machira, kudhinda uye dhayi, mugodhi wemarasha, kutambisa kupisa kudzoreredza uye mamwe mapurojekiti;
Odha yakawanda:1 set;
Kutenderera kwekugadzira:kugadzirisa uye kugadzira zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi;
Packaging nzira:kusangana nehunyanzvi hwekurongedza zvinodiwa;
Nzira yekufambisa:kutakura motokari kana gungwa;
Settlement nzira:telegraphic transfer, 30% dhipoziti, yakabhadharwa isati yasvika;
Mushure mekutengesa sevhisi:kupa technical consulting services
Market uye Brand
1. Ndeapi matunhu aunonyanya kushanda pamusika?
Nyika, North America, India, Middle East.
2. Ndedzipi nzira dzekusimudzira vatengi dzekambani yako?
Kutumirwa kwevatengi, kusimudzira mutengesi, kukwidziridzwa kwetiweki.
3. Iwe une yako brand?
4. Ko kambani yako inobatanidzwa mukuratidzira here?Zvii chaizvo?
Akatora chikamu muzviratidzwa zvemumba uye haana kumbobvira atora chikamu mune zvekunze kuratidzwa.
5. Chii chaunoita mukugadzira mutengesi uye manejimendi?
Hapana mutengesi.Iyo yakananga yekutengesa modhi inonyanya kugadzirwa uye inochengetwa nevatengi vakakura.
Nguva yekuendesa chigadzirwa: 1 zuva kusvika 3 mwedzi yakarongwa.
MOQ: Minimum imwe mudziyo.
Yese yekugadzira kugona: 1 bhiriyoni.
Saizi yekambani: 100 maeka ekugadzirwa kwenyika chirimwa, 150 miriyoni yuan muzvinhu zvakagadziriswa, kutengeswa kwegore negore kwemamiriyoni mazana maviri eyuan, vashandi vangangosvika mazana matatu, uye vanopfuura makumi matanhatu einjiniya nevashandi vehunyanzvi.
Zvakapfuura: Yakakura Metal Yakapedzwa Tube Machine
Zvinotevera: 1070 Aluminium Tube
Yakakura Metal Yakapedzwa Tube Machine